Ergooyinka Shirka Jowhar iyo IGAD oo kulan ay yeesheen Fashil uu ku soo dhamadey
Maalinimadii Shalay ayaa lagu kala tagay Shirka maamulka loogu sameynayo Gobollada Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe oo gogoshiisu tiilay Magaalada Jowhar ayaa Urur Goboleedka IGAD waxa ay u yeereen Ergada ka qeyb galeysa Shirkaasi.
IGAD ayaa kulan ay Ergada wada qaateen kala hadashay Arrimaha Maamul u sameynta , kaasi oo la sheegay in uu ku soo gaba gaboobay is afgaran waa.
Mid ka mid Ergadii ka qeyb gashay Kulanka ayaa sheegay in kulankaas uu fashil ku soo gaba gaboobay,waxaana uu intaas sii raaciyay in Urur Goboleedka IGAD ay ugu baaqeen in faraha kala baxaan Arrimaha Maamul u sameynta.
Dhinaca kale Nabadoonka oo hadalkiisa sii wata ayaa ku eedeeyay IGAD Eex iyo Nin Jecleysi sida uu hadalka u dhigay.
Shirka Maamul u sameynta labada Gobol ee Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe ayaa weli waxaa ka jira is jiid jiid xoogan xilli dhawaan un Madaxweynaha dowladda Federaalka waqtigiisu dhamaaday wajiga 2aad ee Shirkaas uu xariga ka jaray.